बढ्यो कर्मचारीको तलब: अधिकृत भन्दा खरिदार र नासुको धेरै % मा ! – Public Health Concern(PHC)
बढ्यो कर्मचारीको तलब: अधिकृत भन्दा खरिदार र नासुको धेरै % मा !
बुधबार संसदमा नयाँ बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तलव वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । बजेटमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको तलव १८ प्रतिशत र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ !
राजपत्राङ्कित समूहमा शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी पर्दछन् भने राजपत्र अनाङ्कितमा नायव सुब्बादेखि तलका सरकारी कर्मचारी पर्दछन् ।
Tags: Budget NepalBudget Speech 2076health infoKarmachari Salarypublic health updateSalary
स्वास्थ्यमा बजेट २०७६ : के के समेटीए ! (पुर्ण पाठ)